मेरो टिन एज लभ ! एकपटक अवस्य पढ्नुहोला.... -
Home मनोरन्जन मेरो टिन एज लभ ! एकपटक अवस्य पढ्नुहोला….
मेरो टिन एज लभ ! एकपटक अवस्य पढ्नुहोला….
परिवार, साथीभाइ र समाजलाई राम्रोसँग बुझाउन सके किशोरावस्थामा विपरित लिंगीबीच हुने सम्बन्धलाई उनीहरूले सामान्य रुपमा लिने थिए। जसले गर्दा स्वस्थ्य सम्वन्ध विकास हुने थियो। लुकिछिपि भेटनु पर्ने र अपराध गरेको जस्तो व्यबहार सहनु पर्ने थिएन।
विशेषतः किशोरकिशोरीले लुकिछिपि भेट्नुपर्ने र अपराध गरेको जस्तो व्यबहार सहनु पर्ने थिएन। चोखो प्रेम गर्नेहरूले अपराध गरेझैं आत्माग्लानी गर्नुपर्ने थिएन। किशोरावस्थामा भएको रमाईलो सम्वन्धले आफैंलाई बुझ्न र पहिचान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किशोरावस्थाको माया व्यक्तित्व विकासको आयाम हो। एक दशक अघि किशोरावस्थामा सानुले पहिलो प्रेमको अनुभूति सँगाल्दा समाजबाट गल्ती काम गरेको जस्तो व्यबहार भोग्नु परेको थियो।
सुन्दरलाई जीवन साथीका रुपमा नपाउँदा लागेको दुःख भन्दा उसलाई जीवनभर माया, सद्भाव र सम्मान गर्ने असल साथीका रुपमा पाएकामा गर्व गर्छिन्। दुवैले सम्बन्धमा अध्यात्मको संगम गराएका छन्। त्यहाँ शारीरिक र भौतिक सम्बन्धको गुन्जायस छैन। असल साथीको सम्बन्ध छ। यसैगरी उनीहरू खुसी भइरहुन्। धेरैधेरै शुभकामना ! सुनिता खड्काले सेतोपाटीमा लेख्नुभएको छ ।